Mamorona, mizara ary miantraika ny KPI misy anao | Martech Zone
Iray amin'ireo olana niarahako hatrizay Analytics dia ny fiheveran'ireo mpivarotra fa ny fandrefesana refesina maro kokoa no fomba hanatsarana ny sehatr'izy ireo. Na dia tsara aza ny fananana miova an'arivony maro hotaterina, ny fahatakarana izay miovaova misy fiantraikany eo amin'ny orinasao dia sarotra kokoa. Ary na ny fahatakarana izay miovaova aza dia mametraka ny fanontaniana momba ny fomba famindrana ny fanjaitra. Ireo sehatra Analytics dia toa miteraka fanontaniana maro kokoa noho ny valiny.
Tidemark Storylines dia sary mihetsika azo zahana izay mitantara ny zava-bitan'ny orinasa iray. Ireo "actiongraphics" ireo dia manambatra ny fizotranao, ny angonao, ary ny angonao avy any ivelan'ny rindrinao hanomezana anao ny sary feno momba ny orinasa. Izy ireo dia manome anao fahaizana mahatakatra sy misy fiantraikany amin'ny fahasalamanao, ny mpiasa, amin'ny ankapobeny, ahoana raha ny fanahafana, ny tombom-barotra ary ny fironana mialoha.
Tidemark dia Enterprise Performance Management namboarina ho an'ny Cloud. Ity misy topimaso:
Isaky ny tranokalan'izy ireo, Tidemark dia mandefa fampiharana an-tserasera natao hanatsarana ny fampiasanao. Ny rindranasan'izy ireo dia mampiasa sehatra fampiharana matanjaka miaraka amin'ny fahaiza-mitantana fahaiza-mitantana natsangana, miantoka ny fahafahanao manamboatra haingana sy haingana ny fampiharana anay amin'ny filàn'ny orinasanao.
Financial Planning - Mamorona drafitra sy vinavinan-tsofina hanampy anao hitarika ny orinasa hanatratra ny tanjonao. Ny drafitra ara-bola dia ahitana ny fizotran'ny fandrindrana fidiram-bola, ny fandrindrana ny mpiasa, ny fandrafetana ny fandaniana amin'ny fandaniam-bola, ny fandrafetana ny teti-bola ary ny fandanjalanjana ary ny fandaminana ny fikorianam-bola, hahazoana antoka fa mahazo sary feno momba ny volanao ara-bola ianao. Miaraka amin'ny fiaraha-miasa sy ny fanadihadiana eo an-toerana dia afaka miverina haingana miaraka amin'ny vinavina vaovao ianao rehefa miova ny orinasanao.
Fandaminana asa - Araraoty ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fakana sary avy amin'ireo olona akaiky ny vokatra sy ny mpanjifa. Ny drafitra fandidiana dia ahafahanao manangona mpamily fiasa mba hiteraka vinavina ara-bola sy drafitra, ahafahanao mahita ny drafi-pandraharahana iray manontolo. Ny fampifandraisana ny drafitra fandaminana sy ara-bola dia manome antoka fa ny tsirairay ao amin'ny fikambanana dia miasa miaraka amin'ny fampahalalana mitovy amin'ny tanjona iray ihany.
Metrics Management - Tombano haingana ny fahombiazan'ny orinasanao iray manontolo ary mandraisa andraikitra raha ilaina izany. Ny fampiharana ny Metrics Management anay dia ahafahanao manaova ny fandinihana ny fahasamihafana mba hanokanana ny olana, hanangona ny tanjon'ny metrika sy ny zava-misy tsy misy ao amin'ny rafitra loharano, hiara-miasa amin'ny tontolon'ny fizotranao, ary hijery ny fiantraikan'ny valim-bola.
Ny rindran'i Tidemark dia mizara sehatra fampiharana miorina amin'ny rahona izay manome ny rafitra hiantohana ny fampiharana sy ny hetsika rehetra ataonay.
Tags: dashboardFitantanana ny fahombiazan'ny orinasakpistantara mitantaratidemarktantara mitohy amin'ny tidemark